Shutter: Ithuluzi lokuthwebula isikrini elihle kakhulu. | Kusuka kuLinux
I-Shutter: Ithuluzi lokuthwebula isikrini elihle kakhulu.
Mhlawumbe uyazi noma mhlawumbe awazi, kepha iShutter iyithuluzi lokuthwebula isikrini elingcono kakhulu laphaya leLinux. Ngokulungiswa okulula kungenzeka ukuthola yonke imiphumela oyifunayo: bamba kuphela isiqeshana, iwindi noma imenyu, ulungise ukulungiswa nosayizi wezifinyezo noma wenze zonke izinhlobo zemiphumela ekubambeni, njengokubeka imiphetho eyindilinga, izithunzi, njll.
Uma wake wasebenzisa i-Shutter ngokuqinisekile uzovumelana nami, uma ungakakwenzi okwamanje, ngicabanga ukuthi leli yithuluzi olifunayo.
Lolu hlelo lokusebenza lunikeza abasebenzisi izilungiselelo eziningi lapho bathwebula into kusuka kudeskithophu yethu. Nge-interface ehlelekile nenembile, kungenzeka ukuthatha izithombe-skrini zedeskithophu yonke, amawindi, amamenyu, amabhokisi ezingxoxo, izifunda ezikhethiwe kanye namawebhusayithi ngaphandle kokuyivula kusiphequluli sethu.
Uma ufuna ukufaka iShutter ku-Ubuntu 10.10: Sithayipha okulandelayo ku-Terminal.
Lesi yisampula salokho ongakuthola nge-Shutter.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » I-Shutter: Ithuluzi lokuthwebula isikrini elihle kakhulu.
Ngangihlale ngizwa ngakho, kepha ngangingakaze ngizame. Ngizamile inguqulo ye-debian emdala kancane futhi ngazithanda kakhulu izinketho ezinazo, hhayi kuphela ukuthi zinemiphumela eminingana, kepha futhi namamenyu nezinto, ithuluzi elihle. Angazi ukuthi ngizoyisebenzisa kangakanani, kepha lapho ngiyidinga khona useduze 🙂
ps: yebo, manje ngibeka amakhala kuma-Izithonjana ami 😛
Ngiyakuqinisekisa ukuthi leli thuluzi lihamba phambili!
Ngifuna ukuphawula ukuthi njengamanje ngiyisebenzisa kanye nohlelo lwe-python (ku-Ubuntu) ukulayisha izithombe-skrini ku-MyCloudApp, ngoba alikho itheku lohlelo lwakho lokusebenza oluzoxhuma ku-linux.
yebo, kubonakala kunjalo!
Ngiyavuma ngokuphelele… .futhi mahhala… :)
Umncintiswano: Ama-Desktops aphezulu we-5 Linux
Umhlahlandlela wokuthuthela kudeskithophu yesoftware yamahhala